आलिया-रणवीर विवाह: ब्याचलर पार्टी गर्दै रणवीर ! - Laltin Media
Home»ग्ल्यामर»आलिया-रणवीर विवाह: ब्याचलर पार्टी गर्दै रणवीर !
आलिया-रणवीर विवाह: ब्याचलर पार्टी गर्दै रणवीर !
By लाल्टिन डट कम April 6, 2022 Updated: April 6, 2022 No Comments2 Mins Read
बलीवुडको चर्चित कपल रणवीर कपूर र आलिया भट्काे विवाह चर्चाले बलीवुडमा राैनक बढाइरहेकाे छ। कोरोना महामारीकाे गति मत्थर भएपछि याे जाेडी १७ अप्रैल, २०२२ मा विवाह बंधनमा बाँधिने खबरे आइरहेकाे छ। यद्यपि, अहलेसम्म आलिया र रणवीरकाे परिवारले उनीहरूकाे विहेकाे डेट प्रति केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर मीडिया भने याे रिपोर्ट वायरल भइरहेकाे छ । साथै, अहिले याे कपलकाे विवाहमा उपस्थित हुने गेष्ट लिस्ट पनि आउट भएकाे छ। यसलाइ हेर्दा लाग्छ कि याे कपलको विवाह निकै नै ग्रयाण्ड हुने वाला छ।
फ्यानहरुको मनपर्ने कपल, रणवीर र आलियाकाे विहेमा सम्पूर्ण चर्चित कलाकारहरूकाे लिस्ट लिक भइकाे छ। यसमा प्रशिद्ध प्रोड्यूसर करण जौहर र डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, बॉलीवुडका किंग शाहरुख खान, एक्टर वरुण धवन, डिजाइनर मसाबा गुप्ता, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर र रणबीर-आलियाको मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ब्रहमास्त्र’ का डायरेक्टर अयान मुखर्जीकाे नाम उल्लेख छ।
रणबीर-आलियाकाे विवाहमा घरबाट करीना कपूर, सैफ अली खान, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, रणधीर कपूर, शाहीन भट्, महेश भट्, सोनी राजदान, करिश्मा कपूर समेत सबै परिवारकाे उपस्थिति रहने जनाइकाे छ। खबर अनुसार, याे कपलकाे विवाह चेंबूरमा स्थित फेमस आर.के स्टूडियोमा हुन गइरहेकाे छ।
यसैबीच, रणवीर कपूरले ब्याचलर पार्टी गर्न लागेकाे खबर पनि छ। यी रिपोर्ट्सले फ्यानहरु निकै उत्साहित भइरहेका छन् र यस जोडी चाँडैनै विवाह बंधनमा बाँधिएकाे हेर्ने प्रतिक्षामा छन्।
#आलिया-रणवीर विवाह: ब्याचलर पार्टी गर्दै रणवीर !
देशभरका हलमा ‘लाइफ इन एलए’